Ny dingana famokarana tavoahangy fitaratra dia misy ny:
① Fanomanana mialoha ny votoatiny. Kapohina ny akora vita amin'ny mason-dranomasina (fasika quartz, lavenona soda, limestone, feldspar, sns) mba hamafana ny akora mando, ary esory ny akora misy akora misy rano hiantohana ny kalitao.
② Fanomanana fitaovana fandroana.
③ Melting. Ny fitaovana vita amin'ny vera dia hafanaina amin'ny mari-pana avo (1550 ~ 1600 degre) ao anaty dobo filomanosana na fatana handoroana azy io mba hamolavany fitaratra tsy mitovy, tsy miboiboika ary vera misy rano izay mahafeno ny fepetra takiana.
④Forming. Atsipazo ao anaty lasitra ilay fitaratra ranon-javatra mba hahavitana ny vera amina vera ilaina, toy ny takelaka fisaka sy ny fitaovana isan-karazany.
. Fitsaboana hafanana. Amin'ny alàlan'ny fanakorontanana, ny famonoana sy ny lamina hafa, ny adin-tsaina, ny fisarahana eo amin'ny dingana na ny crystallization ao anaty fitaratra dia esorina na vokarina, ary ny toetran'ny fitaratra dia miova.
二, ny fahasamihafana eo amin'ny fitaratra matevina sy ny fitaratra tsy mahazaka hafanana
1. Fampiasana samihafa
Ny fitaratra be dia be ampiasaina amin'ny fananganana, haingon-trano, indostrian'ny fanamboarana fiara (varavarana, varavarankely, rindrina makarakara, haingon-trano anatiny, sns), trano famokarana fanaka (fitoviana fanaka, sns), ny indostrian-trano famokarana fampitaovana (valam-pahitalavitra, lafaoro, rivotra conditioners, vata fampangatsiahana ary vokatra hafa).
Ny vera miaro amin'ny hafanana dia ampiasaina indrindra amin'ny indostrian'ny zavatra ilaina isan'andro (famonosana fitaratra azo avy amin'ny hafanana, lovia fitaratra fitaratra azo avy amin'ny hafanana, sns), ary ny indostrian'ny fitsaboana (matetika dia ampiasaina amin'ny ampoule medikaly sy mpanondrana andrana).
2. ny fiantraikan'ny mari-pana
Ny fitaratra miaro amin'ny hafanana dia karazana fitaratra miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana mahery vaika (afaka mahatanty ny fihenan-drà haingana sy ny fiovan'ny hafanana haingana ary ny fanamafisana ny fitrandrahana hafanana), ary mampiasa mari-pana (hafanana ambony sy mari-pana malefaka), ka ao anaty lafaoro sy lafaoro microwave. , na dia vetivety aza ny mari-pana dia azo ampiasaina tsara ihany koa rehefa ovaina.
Ny fanovana vetivety amin'ny fitaratra azo alaina ao anaty lafaoro microwave dia mety hiteraka fanerena. Eo am-panaovana ny fitaratra nahamay, noho ny «nickel sulfide» ao anatiny, dia hitarina ny fitaratra miaraka amin'ny fiovan'ny fotoana sy ny mari-pana, ary mety hipoaka ny tenany. Tsy azo ampiasaina mihitsy.
3. Fomba fanorotoroana samy hafa
Rehefa tapaka ny vera miaro amin'ny hafanana dia ho triatra ary tsy hiparitaka. Ny fitaratra azo avy amin'ny hafanana dia tsy misy atahorana hipoaka tanteraka noho ny nickel sulfide, satria ny fitaratra miaro amin'ny hafanana dia mihena tsikelikely, ary tsy misy angovo hahazoana enta mivoaka ao anaty fitaratra, ka potika tsy hihoatra.
Rehefa mihetsika ny vera mihetsika dia mikoropaka sy manidina. Mandritra ny fizotran'ny famporisihana, ny fitaratra misy endrika dia manome voninahitra ny angovo sy ny angovo, ka rehefa simba na mipoaka izy, dia hafahana ny angovo voaterina, mamolavola ireo sombintsombiny ary mipoaka.